काठमाडौँ, भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि भोलिदेखि मतदान हुँदैछ। निर्वाचनको परिणामका विषयमा अनेक अड्कलबाजी र चर्चा जारी छ । निर्वाचनमा कसले जित्ला भन्ने तर्कहरुले भारतीय अखबारका पाना रंगिएका छन् । टेलिभिजनमा बिहानदेखि साँझसम्मको चर्चा पनि यही छ । तर चुनाव जित्नेको तस्बिर अझै धमिलै छ्, कसैको पक्षमा सङ्लिएको देखिँदैन । तर यतिबेला भने सारा भारतीयहरु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पाँच वर्षअघिका बाचा सम्झिएका छन् ।
उनले अघिल्लो चुनावमा अघि सारेका कामहरुको लेखाजोखा गर्दैछन् । पहिलो निर्वाचनमा मानौँ कि भारतीय नेसनल कङ्ग्रेसकै कारण देशको विकास हुन नसकेको र भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गर्ने मोदीको यो पूरा कार्यकाल के कसो भयो, उनका बाचाहरु के कति पूरा भए, विपक्षी कङ्ग्रेस र अरु दलमाथि उनले अघिल्लो निर्वाचनमा लगाएका आरोपहरु के कसरी प्रमाणित भए भन्ने हिसाब किताब अहिले जनताले मिडियामार्फत खोजिरहेका छन् । उनको कार्यकालको लेखाजोखा गर्दै जनताले सत्तामाथि औँला ठड्याइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सरकार निर्माण गर्नेगरी सुविधाजनक बहुमत आउँछ कि आउँदैन ? त्यस दलको मात्र बहुमत प्राप्त हुन नसके पनि भाजपाको सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ या सक्दैन ? यो दुवै अवस्था रहेमा सत्ता समीकरण कस्तो होला ? यिनै प्रश्नको वरिपरि जारी बहसमा चर्चाको केन्द्रमा भाजपा छ । अनि त्यस केन्द्रको पनि भित्री भागमा छन् प्रधानमन्त्री मोदी । अनि कतिपयले भाजपा एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेमा या राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) ले बहुमत प्राप्त गरेमा प्रधानमन्त्रीमा मोदी नै पक्का भनेका छन् भने केहीले यसप्रति केही संशय पनि राखेका छन् । तर विपक्षी कङ्ग्रेस पनि अरु विपक्षी दलहरुको एकीकृत प्रगतिशील गठबन्धन (युपिए) का साथ निर्वाचनमा होमिएको छ ।
उसले सरकार निर्माण गर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार को हुन् भन्ने खोजी पनि व्यापकै छ । उक्त विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएका तीनजना नेतामा राहुल गान्धी, ममता बनर्जी र मायावती रहेका छन् । तीमध्ये एकजनामा को भन्ने चाहिँ यकिन भएको छैन । तर पहिलेको तुलनामा अहिले कङ्ग्रेसको गठबन्धन भने निर्वाचनको मुखमा आएर बलियो भएको महसुस गर्न थालिएको छ । कतिपय राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरु कङ्ग्रेसबाट निर्वाचन उठेका र छुवाछुत, जातीयता र हिन्दू कट्टरतासम्बन्धी प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाका कतिपय विवादास्पद अभिव्यक्तिहरुका कारण पनि कङ्ग्रेसका पक्षमा यो माहौल बन्न पुगेको जस्तो देखिएको छ । तर पनि अहिलेको निर्वाचन दलका आफ्ना मूल एजेण्डाहरु भन्दा पनि दलगत र व्यक्तिगत गालीगलौजमा ओर्लिएको देखिएको छ ।
यस निर्वाचनको यो अलग्गै अवस्था हो । भारतीय संसदको तल्लो सभा, लोकसभाका ५४५ मध्ये ५४३ सांसदका लागि हुने यस निर्वाचनमा करिब ९० करोड भारतीय मतदाता छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यस पटकमात्र यहाँ करिब डेढ करोड नयाँ मतदाता थपिएका छन् । नेपाली मिति अनुसार भारतमा यही चैत २८ गतेदेखि शुरु हुने यस निर्वाचनको जेठ ५ गतेसम्म मतदान नै जारी रहन्छ । यो निर्वाचन सात चरणमा हुन लागेको छ । आगामी जेठ ९ गते (मे २३) मा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुने कार्यक्रम छ । सात चरणमा सम्पन्न हुन लागेको यस निर्वाचनको करिब ६ हप्ताको कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले पहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
मोदीका चूनौती प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय सत्ताको आरोहण ‘पहिले छिमेक नीति’बाट आरम्भ भएको हो । उनको परिभाषामा यसको अर्थ थियो भारत दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो देश भएकोले उसले कम्तीमा पहिला यस क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ र अभिभावकको व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ । तर उनको यो नीति अर्काे चुनावको सम्मुखमा आइपुग्दा पाकिस्तानमाथिको आक्रमणमा गएर टुङ्गिएको छ । यता भारतमा निर्वाचनको प्रचार जारी रहेकैबेला भारतले पाकिस्तानमाथि युद्धक विमानबाट हमला थालेको थियो । त्यसैले भारतका कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले मोदीको विदेश नीतिको विश्लेषण यहीँबाट थालेका छन् । र त्यसलाई पछ्याउँदैछ नेपालमाथिको नाकाबन्दीले । नेपाल पनि भारतको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हो । तर मोदीकै कार्यकालमा नेपालले नाकाबन्दीजस्तो कूटनीतिको कठोर पराकाष्ठा व्यहोर्नुपरेको थियो । त्यो पनि मोदीको कार्यकालको विदेश नीतिको एक उदाहरणका रुपमा रहेकै छ । तर पाकिस्तानमाथिको ‘एयर स्ट्राइक’ ले प्रधानमन्त्री मोदीलाई केही दिनमात्रको हाइहाइमा सीमित राख्न सक्यो ।
भारतको पुलवामामा गएको फागुन २ गते गरेको हवाई हमलाको जवाफमा भारतले पनि पाकिस्तानमाथि हवाई हमला गरेको हो । शुरुमा भारतले पाकिस्तानमाथि हमला गरेको देखियो र भारतभर मोदीको हाइहाइ भयो । तर केही दिनका भारतभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्लेषणहरुको अध्ययन गर्दा लडाईँ पाकिस्तानले र त्यो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री इमरान खानले जितेको देखियो । भनिन्छ, युद्ध हतियारभन्दा बढी मनले पनि जित्न सकिन्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले विश्व, पाकिस्तान मात्र त के कतिपय भारतीयकै पनि मन जितेको महसुस गरियो । यसरी चुनावको मुखमा पारेर भारतीय जनताको भावना जित्न मोदीले गरेको आक्रमणको तिर अहिले भाजपा र उनीतिरै फर्किएको देखिएको छ । यो आक्रमणले मोदीलाई मत नबढाउने निष्कर्ष धेरैको छ ।
कङ्ग्रेस र उसको गठबन्धनले जितेमा प्रधानमन्त्री को हो भन्ने बारेमा अहिले नै स्पष्ट बाहिर आउन नसक्नुलाई पनि कङ्ग्रेसको कमजोर अवस्थाकारुपमा हेर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सोनिया गान्धीकी छोरी प्रियंका गान्धीको चर्चाले त्यहाँको निर्वाचन अभियानमा केही तताएको छ । त्यस्तै कतिपय चर्चित कलाकारहरु पनि कङ्ग्रेसबाट निर्वाचन उठ्नेमा दर्ज भएका छन् । यसको माहौल पनि त्यत्तिकै छ । तर पनि यत्तिले मात्र कङ्ग्रेसको पक्षमा माहौल बनाउन पूरै रुपमा सघाउँछ भन्न सकिँदैन ।
सोनियाको आकर्षण देखिए पनि राहुलको विश्वसनीय र परिपक्व चुनावी वातावरण बन्न सकेको देखिन्न । अनि नेतृत्वबाट भाजपाका विरुद्ध राष्ट्रलाई स्पष्ट र भरपर्दाे नेतृत्व एवम् एजेण्डा दिनसक्ने जस्तो अहिले नै देखिँदैन । कङ्ग्रेसलाई सधैँ लाग्ने नै गरेका आरोपहरु जस्तो परिवारवादी, पुरातनपन्थी, हिन्दूधर्म विरोधी आरोप अहिले पनि लागेकै छ । जुन कुराहरु अहिले पनि भाजपाका एजेण्डा नै बनेका छन् । त्यसैले यी सबै माथिका अवस्था र परिस्थितिहरुको मिहिन विश्लेषण गरी हेर्दा भारतमा अहिलेको सत्ता राजनीतिमा आगामी निर्वाचनले आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्न सकिँदैन ।
अहिले जे जस्ता प्रश्न उठेको भए पनि अर्काे नेतृत्वमा पनि भाजपाकै सम्भावना बढी देखिन्छ । तर पनि अहिलेको जस्तो स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि सरकार निर्माण गर्नसक्ने सामान्य बहुमतमा भाजपाको गठबन्धन नै अगाडि देखिन्छ । जनसंख्या र भूगोलकै हिसाबले विश्वको ठूलो प्रजातन्त्र ठानिने भारतमा हुन लागेको यस आमनिर्वाचनको चासो भारतमा मात्र सीमित हँुदैन, यसको हारजितले सिङ्गो दक्षिण एसियालाई नै कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्न खोज्दछ । यसकारण पनि भारतको चुनावी चर्चा बढी नै हुने गर्दछ । (पाठक राससका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित : बुधबार, चैत २७, २०७५१६:३३